septembre 2014 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Dia manamafy an’izay,ary izay ny Visite Pastorale voalohany nataontsika teto fa ny mijery an’iny dia anjaran’ny filan-kevitra izay efa nahazo iraka hatry ny omaly : Andeha hitady sy hamerina ny andian’ondrin’Andriamanitra ato an-tranony. (suite…)
Continuer la lecture Alahady – 21/09/2014 – Toriteny
Alahady – 21/09/2014 – Tenin’Andriamanitra
Vakiteny voalohany: Bokin’i Izaia Mpaminany (55, 6-9)
Ny fihevitro tsy fihevitrareo.
Mitadiava ny Tompo, dieny mbola mety ho hita izy. Miantsoa Azy dieny mbola akaiky Izy. Aoka ny ratsy fanahy hiala amin’ny lalany, ary ny meloka amin’ny heviny; ka hiverina amin’ny Tompo izy, dia hamindrany fo; dia amin’Andriamanitra fa mamela malalaka Izy. Fa ny fihevitro, tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo, tsy mba lalako. – Teny marin’ny Tompo. – Tahaka ny haavon’ny lanitra noho ny tany, no haavon’ny fihevitro noho ny fihevitrareo.
Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Filipy (1, 20d-24. 27a)
I Kristy no velona ato amiko.
Ry kristianina havana, homem-boninahitra amin’ny tenako i Kristy, na velona aho, na maty. Satria raha ny amiko, dia i Kristy no ahavelomako, ary ny fahafatesana no ahazoako tombony. Raha mbola velona amin’ny nofo anefa aho, dia ho fahavokaran’ny asako izany, ka tsy hitako izay hofidiko, fa sanganehana eo anelanelan’izy roa ireo aho: ny handeha ho any amin’i Kristy moa, iriko sy tsara lavitra; nefa ny hitoetra amin’ny nofo kosa no ilaina kokoa noho ny aminareo.Fa izao ihany e: manaova fitondran-tena mendrika ny Evanjely ianareo.
Evanjely Masina nosoratan’i Md Matio (20, 1-16a)
Sa ratsy ny masonao, satria tsara aho? (suite…)
Continuer la lecture Alahady – 21/09/2014 – Tenin’Andriamanitra
Isaky ny faha-14 ny volana septembra toy izao dia mankalaza ny nanandratana ny hazo fijaliana masina ny fiangonana katolika manerantany. Inona moa ny antony ny fitiavana an’ity daty ity manokana. Nisy amperora iray lehibe sady malaza izay atao hoe Constantin; olona tia tena izy io no nandray ny vaovao mahafaly, dia izy no amperora voalohany nanaiky hatao batemy ary ho tonga kristianina, dia natao batemy izy mivady tamin’ny 14 septembra taona 335. Ary nanapa-kevitra izy ireo nanangana bazilika lehibe teo Golgotha, toerana izay namantsiana an’I Jesoa. Dia nanomboka tamin’io taona io no nanandratana ny 14 septembra ho fankalazana ny hazo fijaliana masina.
Ny vakiteny izay natolotra atsika androany dia mampatsiahy sy mampitodika atsika hoe : inona marina ity hazo fijaliana ity?, inona ny hevitry ny hazo fijaliana masina ho atsika? (suite…)
Continuer la lecture Alahady – 14/09/2014 – Toriteny
Vakiteny voalohany: Boky Fanisana (21, 4b-9)
Izay voakaikitra ka mijery ny bibilava varahina dia ho velona aina. $
Tamin’izany andro izany, dia nanomboka tofoky ny lalana sy ny asa ny vahoaka, ka niteny nanome tsiny an’Andriamanitra sy Môizy nanao hoe: “Nahoana no dia nentinao niakatra avy tany Ejipta izahay ho faty aty an’efitra? Ny mofo tsy misy, ny rano tsy misy, ary ny fanahinay efa monainan’ itony hanina tsinontsinona itony”. Ary Andriamanitra tamin’izay nandefa bibilava mahamay hamely ny vahoaka: nokaikerin’ ireny ny vahoaka ary nahafatesana betsaka ny olona tamin’i Israely. Nankeo amin’i Môizy ny vahoaka ka nanao hoe: “Efa nanota izahay fa niteny nanome tsiny an’Andriamanitra sy ianao. Mivavaha amin’ Andriamanitra mba hoesoriny lavitra anay ireo bibilava ireo”. Dia nivavaka ho an’ny vahoaka i Môizy, ka hoy Andriamanitra tamin’i Môizy: “Manaova ianao bibilava mahamay ka apetraho amin’ny tsato-kazo, fa ho velona aina izay rehetra voakaikitra ka mijery izany”. Dia nanao bibilava varahina i Moizy, ka napetrany teo amin’ny tsato-kazo lava, dia nijery ny bibilava varahina izy dia velona.
Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Filipy (2, 6-11)
Nilatsa-tenany ho ambany Izy; ho valin’izany kosa dia nasandratr’ Andriamanitra Izy. I Kristy Jesoa na dia tao amin’ny fomban’Andriamanitra aza, dia tsy nihevitra ny fitoviany saranga amin’Andriamanitra ho zavatra nobaboiny, tamin’Izy naka ny fomban’ny mpanompo, ka tonga mitovy amin’ny olombelona, sy hita ho olombelona tamin’ny fisehoany rehetra, ary nilatsa-tenany ho ambany, nanolo-tena hanaiky hatramin’ny fahafatesana, dia fahafatesana tamin’ny Hazofijaliana. Ho valin’izany kosa, dia nasandratr’Andriamanitra Izy, sy nomeny Anarana mihoatra ny anarana rehetra, mba handohalika amin’ny Anaran’i Jesoa avokoa ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambany, ary mba hanaiky avokoa ny lela rehetra fa i Jesoa Kristy dia Tompo efa niditra amin’ny voninahitr’Andriamanitra Ray.
Evanjely Masina nosoratan’i Md Joany (3, 13-17)
Tsy maintsy asandratra ny Zanak’Olona. (suite…)
Continuer la lecture Alahady – 14/09/2014 – Tenin’Andriamanitra
Alahady – 07/09/2014 – Toriteny
Ny kristianina tsy mifampijery harina antava.
Io no foto-kevitra nambaratsika tany ampiandohan’izao sorona masina izao, hodinihitsika ary ezahitsika iainana, isankerin’andro dia misy mandrakariva lohahevitra banjinitsika , amin’ity herinandro ity dia ny fiarahamonina sy fifankatiavana dia azotsika soloina ilay kristianina, dia ny olona tia tsy mba mijery harina antava.
Ho raisitsika ireo, raha mijery ny vakiteny voalohany isika tao amin’ny bokin’I Ezekela dia miteny sy afaka mamintina izay hoe tsy mijery harina antava izay. Izao no tenin’I Ezekela : “ Raha niteny aho nilaza tamin’ny ratsy fanahy hoe ho faty marina ianao ry ilay ratsy fanahy”, Andriamanitra no niteny an’io, “ka tsy niteny ianao nananatra ny ratsy fanahy hiala amin’ny lalany dia ho faty amin’ny helony iany ilay io, noho izy ratsy fanahy, nefa ho adiniko aminao ny rà-ny” . Andriamanitra mampiteny an’I Ezekela satria ireo vahoaka Jody ireo nanarin’Andriamanitra tamin’ny fomba isankarazany nefa tsy nety niala tamin’ny lalandratsy dia izay no natonga an’Andriamanitra niteny tamin’ny Ezekela hiteny amin’ireo vahoaka ireo hiala amin’ny lalandratsy, dia izao no nataon’Andriamanitra hoe, raha tsy niteny ianao nananatra ny ratsy fanahy dia ho faty amin’ny helony iany io, izany hoe, ho faty amin’ny helony, atsoiny ilay ratsy fanahy, fa ianao ilay nampitondraina hafatra iany koa, ho adinina aminao ihany koa ny rà-ny, satria ho faty io olona io, nefa tsy fantany akory hoe tsy mety ny zavatra ataony ary efa itanao ilay olona fa efa makany amin’ny lalan’ny fahaverezana dia mbola manao tazandavitra tsy miteny, fa ho faty iny olona iny, ary raha ho faty iny olona iny, ianao izay mahalala fa tsy mety ny nataony, diso koa ianao, ary ho adinina aminao koa ny ràn’iny olona iny, izany hoe mandray anjara amin’ny fahaverezan’iny olona iny koa ianao raha toa ka tsy miteny azy nefa fantatrao fa lalana ahavery azy ny lalana alehany. Dia ny tohiny, Ezakela ihany :” Fa raha mananatra ny ratsy fanahy kosa ianao hiala amin’ny lalany dia ho faty ao amin’ny helony izy, fa ianao kosa hahavonjy ny fanahinao”, izany hoe ianao nandray andraikitra fa izy no tsy mety miala amin’ny lalany, ho faty izy fa ny fanahinao kosa ho voavonjy. Izay zany, io efa re-tsika Malagasy,” tsy mifampijery harina antava”, efa hita fa lalan’ny fahaverezana no alehan’ilay olona, maty ilay olona, dia diso miaraka aminy isika, raha niala nenina ihany isika niteny, fa izy tsy mety miala amin’iny lalany iny, izy tsy maintsy ho faty fa ianao kosa navita ny adidinao ary afaka ka voavonjy ny fanahinao.
Dia ao amin’ny Evanjely, re-tsika teo mbola mitovitovy hevitra amin’izay ihany ; “raha diso taminao ny rahalahinao, manantona azy”, (suite…)
Continuer la lecture Alahady – 07/09/2014 – Toriteny